Habka Lacag- Stake Stake
Qulqulka Tooska ah
Deposit at Stake adigoo isticmaalaya tiro cryptocurrencies kala duwan, ama door Stake si aad u maalgeliso xisaabtaada sharadka saamiga.
Hababka Lacag-bixinta Saamiga
Ugu dambeeyay ee ku sharadka Crypto
Sida Loo Deposit At Stake.com
Sida Lacagta Loola Baxo
Bonus Deposit saamiga
Cryptocurrencies ayaa laga heli karaa Saamiga
Ku iibso Crypto MoonPay
Stake.com waa dhammaan ku saabsan crypto. Waxaad ku shubi kartaa akoonkaaga Stake adoo isticmaalaya cryptocurrencies badan oo kala duwan.
Debaajiga waxaa lagu samayn karaa iyadoo la adeegsanayo Bitcoin , Ethereum , Dogecoin , Litecoin , Bitcoin Cash, Ripple , Tron iyo EOS .
Haddii aadan hadda lahayn wax crypto oo aadan haysan boorsada crypto, waxaad ka iibsan kartaa crypto on Stake adoo isticmaalaya suuqa cryptocurrency MoonPay , kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku beddelato crypto adoo isticmaalaya kaarka deynta, kaarka deynta, Apple Pay , Google Pay ama Bank Wareejin
Debaajiga leh EOS
Sida loo sharadka EOS on Stake
21 Lix 2022
Tilmaamaha Lacagta Crypto
Sida loo iibsado crypto on Stake
Stake Crypto Options
Waa maxay Crypto waxay bixisaa Stake ?
Hagaha Stake saamiga
Stake.com iyo Blockchain
Way fududahay oo way fududahay in lacagaha lagu shubo akoontada Stake . Waa kan hagahayaga degdega ah:
Isticmaal xiriiriyeyaasha boggan si aad u gasho bogga rasmiga ah ee Stake.com .
Soo gal ama dhagsii badhanka 'Diiwaangelinta' si aad dhakhso ugu samaysato akoon cusub.
Dooro dalka aad ku nooshahay.
Marka lagu weydiiyo haddii aad leedahay kood, ku qor koodhka xayeysiinta ee Stake.com NEWBONUS . Adigoo isticmaalaya koodhkan, ciyaartoy cusub ahaan waxaad dalban kartaa ilaa $1000 oo gunno ah.
Markaad is diiwaan geliso, dhagsii badhanka 'Wallet'
Shaashada xigta, waxaad awoodi doontaa inaad ka doorato liiska lacagaha la aqbalay ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
Guji badhanka 'Deposit' oo raac tilmaamaha shaashadda si aad lacag uga soo dirto boorsadaada Stake xisaabtaada Saamiga. Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa MoonPay si aad u iibsato crypto oo aad ugu dirto ciwaanka Stake .
Markaad tan sameyso, waxaad bilaabi kartaa samaynta sharadkaaga.
Debaajiga ugu yar waa $5 ama lacag u dhiganta.
Way fududahay oo way fududahay in lacag lagala baxo akoonkaaga Stake . Waa kan hagahayagii:
Hubi inaad gashay akoonkaaga ka dibna dhagsii badhanka 'Wallet'.
Dooro tab 'ka bixitaan'
Dooro qaddarka aad rabto inaad kala baxdo baaqigaaga, oo geli ciwaanka cryptoga
Haddii loo baahdo, buuxi Oggolaanshaha Labada Qodob, dabadeed dhagsii 'Ka-noqoshada' si aad u xaqiijiso wax kala iibsiga.
Ka bixitaankaada ayaa markaa laga baaraandegayaa. Qadarka wakhtiga ay kugu qaadanayso inaad lacagtaada hesho way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xidhan cryptocurrency aad isticmaalayso. Bixinta qaar waa degdeg, halka kuwa kalena ay qaadan karaan ilaa 15 daqiiqo si ay ugu muujiyaan boorsadaada crypto.
Ciyaartoyda cusub waxay heli karaan 200% gunno dhigaal ah markay iska diiwaan gelinayaan code- NEWBONUS .
Wadar dhan $1000 oo gunno ah ayaa la sheegan karaa marka la isticmaalayo koodka xayeysiinta ee Stake.com . Waa kan sida aad u sugi karto gunnadaada:
Furo akoon sida lagu sharaxay boggan
Marka lagu weydiiyo haddii aad leedahay kood, ku qor koodka xayaysiinta ee Stake.com NEWBONUS
Samee deebaaji lacagtaada dhabta ah ee ugu horeysa
Marka aad samayso deebaajigii ugu horeeyay, waxa aad heli doontaa 200% deposit bonus ilaa ugu badnaan $1000.
Si aad u hesho gunnada $1000 oo dhan, waa inaad dhigataa $500 oo ah lacagta crypto. Haddii aad dhigi lahayd $100, waxaad heli doontaa $200 oo gunno ah.
Waxaad ku shubi kartaa adigoo isticmaalaya tiro ka mid ah lacagaha crypto kala duwan ee Stake.com . Kani waa buug-gacmeedka ugu weyn ee loo yaqaan 'crypto sportsbook' iyo casino!
Lacagta loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee la aqbalay waa sidan soo socota:
Markaad abuurto boorsada crypto, way fududahay inaad ku shubto crypto at Stake adoo isticmaalaya cryptocurrency kasta oo la aqbalo. Kaliya raac talaabooyinkan:
Gal akoonkaaga Stake Haddii aadan weli ku biirin, si degdeg ah iskaga diiwaan Stake.com halkan.
Tag bogga 'Wallet' oo dooro 'Deposit'.
Dooro lacagtaada cryptocurrency ka dib u gal boorsadaada crypto oo dhagsii bogga 'Dri/Codsi'.
Geli ciwaanka lagu siiyay markii aad dooratay lacagta cryptocurrency (tusaale, BTC, ETH ama DOGE) dabadeed ku qor inta crypto aad jeceshahay inaad ku shubto akoonkaaga sharadka.
Ugu dambeyntii, dhagsii 'Dhaqaale Dir'
Wax kala iibsiga ayaa ku dhow isla markiiba. Markaad aragto shaashadda xaqiijinta, waa inaad aragto crypto-ka laga heli karo akoonkaaga Stake .
Haddii aadan haysan boorsada crypto, waxaad ku shubi kartaa MoonPay
Haddii aadan haysan boorsada crypto, waxaad ka iibsan kartaa crypto adiga oo isticmaalaya suuqa cryptocurrency MoonPay .
MoonPay waxay leedahay in ka badan 5 milyan oo macaamiil ah. Adeegga caanka ah ee loo yaqaan 'crypto' wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku beddesho lacagaha cryptocurrency iyo fiat sida US Dollar ama Euros adoo isticmaalaya hababka lacag bixinta ee waaweyn sida Visa, Mastercard, Apple Pay , Google Pay ama wareejinta bangiga.
Haddii aad isticmaasho kaarka deynta ama kaarka deynta, lacag bixinta si degdeg ah ayaa loo baaraandegi doonaa oo crypto waa la sii daayaa marka dhammaan jeegaga khiyaanada la dhammeeyo.
Apple Pay iyo Google Pay sidoo kale waa la isticmaali karaa, sidoo kale wareejinta Bangiga. Inta badan wax kala iibsiga waxaa lagu farsameeyaa wax ka yar 20 daqiiqo, waxaadna ku iibsan kartaa crypto adoo isticmaalaya lacago badan oo kala duwan oo loo bedeli karo crypto.
MoonPay wuxuu la jaan qaadayaa dhammaan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee lagu bixiyo Stake .